Mogadishu Journal » Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland oo cambaareeyay odayaal la xir xiray
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland oo cambaareeyay odayaal la xir xiray
Mjournal :-Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka dowlad Goboleedka Puntland ee xilka looga qaaday Mooshin ee Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhooba-daareed ayaa ka hadlay xarig shalay Magaalada Boosaaso loogu geystay Odayaal dhaliil u jeediyay Puntland.
Dhooba-daareed ayaa waxaa uu si kulul u Cambaareeyay xariga loo geystay Diraac Yuusuf Buuxe iyo Cawad Maxamed Faarax, kuwaasi xukuumadda Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ku dhaliilay in aysan fulin balan-qaadyadii xiligii Doorashada.
Sidoo kale Odayaasha la xiray oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka soo horjeedan heshiiska DP World iyo Garoonka diyaaradaha Boosaaso loogu wareejiyay Shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka maamulka Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu tilmaamay in Xukuumadda Deni aan looga baahneyn inay Caburiyaan dadka dhaliisha u jeediya ama kasoo horjeesta.
Isaga oo sii hadlaayay Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhooba-daareed ayaa waxaa uu sheegay in Dastuurka Puntland Muwaaadin kasta uu xaq u siinayo inuu dhaliil u jeedin karo Puntland, wuxuuna ku eedeeyay Puntland ay Caburin ku heyso Waxgaradka Puntland.
Hadalka Dhooba-daareed ayaa waxaa kusoo aadayaa, iyadoo shalay Magalada Boosaaso lagu xiray Odayaal dhaliil u jeediyay Xukuumadda Deni, kuwaasi oo lagu xiray Amar kasoo baxay Saraakiisha amniga Puntland.
Howlgallo ka bilowday degaano hoos yimaada deegmada Baardheere
Saraakiisha dowladda oo sheegay in ay dileen xubno ka tirsan Al-shabaab
Dowladda oo ka hadashay arinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur by Ahmed Ali - Fri Dec 6th 14:57:02
QM oo soo saartay waxyeellada ay geysteen Roobabkii k da’ay Bariga Afrika by Ahmed Ali - Fri Dec 6th 13:13:51
Guddoonka Golaha Shacabka oo War kasoo saarey Colaadda Mudug by Ahmed Ali - Fri Dec 6th 12:17:51
DR: Baadiyoow “Ma haboona in qof Muslim ah la gaalaysiiyo mana jiraan Axaadiis La beeniyay by Ahmed Ali - Fri Dec 6th 10:02:00